"Amaxesha nabahlobo" luphawu lwe-Q & A Ilizwi phephancwadi. Phakathi kwe-1906 kunye ne-1916, le mibuzo echazwe ngezantsi ibhalwe ngabafundi Ilizwi yaphendulwa nguMnu. Percival phantsi kwegama elithi "UMHLOBO." Ngokuhamba kwexesha, sithathe isigqibo sokubeka igama lakhe njengombhali weempendulo. Ukugcina ubunyani bembali, naziphi na iimpazamo ekubhalwe kuzo ziye zagcinwa kunye nokusetyenziswa kweziphumlisi ezazithandwa ngelo xesha.
Kwi-1986, iLizwi Foundation lenze ingxelo yekota yeMagazini iLizwi esapapashwayo. Ikwaquka "amaXesha nabaHlobo" icandelo elibandakanya imibuzo ebuzwe ngabafundi bethu.
• Ngaba ungachaza ngokupheleleyo ukuba iingcinga ezahlukeneyo zomntu zisebenza njani kumcimbi wehlabathi ukuze kuveliswe iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana ezinjengengonyama, ibhere, ipikoko, inyoka? (Lo mbuzo ubhekisa kuhlelo lukaPercival Ucinga-Ed.)